HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bengali Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Ga Goujrati Grika Groenlandey Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kambôdzianina Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikaonde Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Kroaty Lingala Litoanianina Luganda Luo Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Mongol Myama Ndebele Ngabere Niue Norvezianina Nyaneka Nzema Népali Oromo Ossète Otetela Ourdou Ouzbek Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Rarotonga Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa (Shanghaï) Sinoa Kantôney Notsorina Sinoa Sichuan Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tahisianina Tailandey Tamoul Tatar Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Totonac Tseky Tshiluba Tsonga Tuvalu Twi Télougou Umbundu Venda Vietnamianina Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
“Tsy nieritreritra ny hijery sary vetaveta mihitsy aho, fa mba nijerijery Internet fotsiny. Nisy dokam-barotra nipoitra tampoka anefa, dia nosokafako ilay izy, dia izay.”—NJAKA. *
“Nisy ankizivavy manja kely izay nanadaladala ahy tany am-piasana. Nilaza tamiko izy indray andro hoe andao, hono, mba hiaraka ho any amin’ny hotely fatoriana izahay sy izy. Fantatro tsara anefa ny zavatra notadiaviny.”—HERY.
MISY mieritreritra hoe zavatra mahafinaritra ny fakam-panahy. Ny hafa indray mihevitra hoe fahavalo tsy azo ivalozana izy ireny, ka tiany horesena. Ary ahoana ny hevitrao? Hanaiky ho resin’ny fakam-panahy ve ianao, sa hanohitra azy ireny?
Marina aloha fa tsy hitera-doza daholo ny fakam-panahy. Tsy tena hoe haninona, ohatra, ianao raha mangala-pihinana. Mety hangidy anefa ny fiainanao, raha manaiky hanao zava-dratsy hafa ianao, indrindra raha mahatonga anao hijangajanga ilay izy. Hoy mantsy ny Baiboly: ‘Tsy ampy saina sy manimba tena izay manitsakitsa-bady.’—Ohabolana 6:32, 33.
Inona no tokony hataonao rehefa alaim-panahy hijangajanga ianao? Hoy ny Baiboly: “Izao ny sitrapon’Andriamanitra, dia ny hanamasinana anareo ka hifadianareo ny fijangajangana sy hahaizanareo tsirairay hifehy tena, amin’ny fahamasinana sy ny haja.” (1 Tesalonianina 4:3, 4) Ireto misy fomba telo hanampy anao hanao toy izany:
1: Mitandrema amin’izay jerenao
Vao mainka ianao te hanao ratsy raha mijery sary manaitaitra ny filan’ny nofo. Hita tamin’ny tenin’i Jesosy fa misy ifandraisany ny faniriana sy ny zavatra jerena. Hoy izy: “Izay rehetra tsy mitsahatra mijery vehivavy ka maniry hanao firaisana aminy, dia efa nanitsakitsa-bady tao am-pony sahady.” Nampiasa sarin-teny izy avy eo, ka nampirisika hoe: “Raha ny masonao havanana àry no mahatonga anao hanota, dia esory ka ario lavitra anao.” (Matio 5:28, 29) Inona no tiany holazaina? Raha te hanohitra fakam-panahy isika, dia tokony hanao zavatra hentitra ka tsy hijery sary manaitaitra ny filan’ny nofo.
Avilio ny masonao rehefa mahita sary manaitaitra
Eritrereto hoe misy olona manao sodiora ka sendra nitopy tany amin’ilay tselatra ny masonao. Mbola hijery any foana ve ianao? Tsy hanao izany ianao mba hiarovana ny masonao. Azo antoka koa hoe havilinao any an-kafa ny masonao, raha sendra mahita olona manao fihetsika manaitaitra ianao, na mahita sary hoatr’izany amin’ny boky na tele na Internet. Arovy ny sainao mba tsy hisy vokany ratsy aminao izany. Hoy i Liva, mpijery sary vetaveta taloha: “Isaky ny mahita vehivavy manja be aho dia satriko foana hijery azy. Aviliko haingana anefa ny masoko sady mieritreritra kely aho hoe ‘Mivavaha amin’i Jehovah! Tena mila mivavaka ianao izao dia izao!’ Mivavaka haingana aho avy eo, ka resiko tsikelikely ilay fanirian-dratsy.”—Matio 6:9, 13; 1 Korintianina 10:13.
Hoy koa i Joba, ilay lehilahy tsy nivadika: “Efa nanao fifanekena tamin’ny masoko aho, koa hataoko ahoana indray no hijerijery virjiny?” (Joba 31:1) Maninona raha mba manao hoatr’izany?
Andramo izao: Raha sendra nahita sary manaitaitra ianao, dia avilio haingana ny masonao. Tahafo ilay mpanoratra Baiboly nivavaka hoe: “Aza avela hifantoka amin-javatra tsy misy ilana azy ny masoko.”—Salamo 119:37.
2: Mitandrema amin’izay eritreretinao
Rehefa mieritreritra zava-dratsy ianao, dia miatoa kely ary mivavaha
Tsy lavorary isika rehetra ka mety hanana fanirian-dratsy indraindray. Hoy ny Baiboly: ‘Tsapaina ny tsirairay rehefa voasariky ny fanirian’ny tenany ihany, ka voafandrik’izany. Ary ny faniriana rehefa kolokoloina, dia miteraka fahotana.’ (Jakoba 1:14, 15) Inona no hanampy anao tsy ho tonga amin’izany?
Raha manana fanirian-dratsy ianao, dia tadidio fa ianao ihany no tompon-tsafidy ny amin’izay hataonao. Reseo ilay izy ary esory ao an-tsaina. Aza manonofinofy zava-dratsy. Hoy i Robert, mpijery sary vetaveta tao amin’ny Internet: “Niezaka nieritreritra zavatra tsara foana aho mba hialan’ilay zava-dratsy tao an-tsaiko. Tsy mora anefa izany. Imbetsaka aho no resy. Vitako anefa ny nifehy an’ilay izy tamin’ny farany.” Hoy koa i Niry, izay niady mafy mba tsy haloto fitondran-tena tamin’ny mbola tanora: “Niezaka ny ho be atao sy nivavaka tamin’i Jehovah foana aho, ka lasa tsy nieritreri-dratsy intsony.”
Andramo izao: Rehefa mieritreritra zava-dratsy ianao, dia miatoa kely ary mivavaha. Esory ao an-tsainao izany, ka araho ity voalazan’ny Filipianina 4:8 ity: “Na inona na inona marina, na inona na inona zava-dehibe, na inona na inona mahitsy, na inona na inona madio, na inona na inona mahatehotia, na inona na inona tsara laza, na inona na inona misy hatsarana, ary na inona na inona mendri-piderana, dia izany foana heverina.”
3: Mitandrema amin’izay ataonao
Mora resy ny olona iray, raha efa manana fanirian-dratsy izy, tojo fakam-panahy, ary tsy sarotra aminy ny manatanteraka an’ilay izy. (Ohabolana 7:6-23) Inona no hanampy anao tsy ho resy?
‘Tsy mampiasa Internet aho raha tsy hoe misy olona eny akaiky eny’
Hoy ny Baiboly: “Malina izay mahatsinjo ny loza ka miafina, fa ny tanora fanahy kosa mbola miroso ihany ka voa.” (Ohabolana 22:3) Mitandrema àry amin’izay ataonao. Eritrereto mialoha izay toe-javatra mety hampidi-doza ka ataovy izay hisorohana an’ilay izy. (Ohabolana 7:25) Hoy i Félix, izay nahavita tsy nijery sary vetaveta intsony: “Ataoko eny amin’ny talaky maso ny ordinateranay sady asiako programa manasivana ny zavatra miseho. Tsy mampiasa Internet koa aho raha tsy hoe misy olona eny akaiky eny.” Nilaza toy izao koa i Robert, ilay voaresaka tetsy aloha: “Tsy mijery filma misy sary manaitaitra aho sady tsy mifanerasera amin’ny olona tia miresaka firaisana. Tsy te hidiran-doza aho tsinona.”
Andramo izao: Fantaro tsara ny fahalemenao, ary ataovy izay hisorohana ny toe-javatra mety hahatonga anao ho tratran’ny fakam-panahy.—Matio 6:13.
Ahoana raha efa niezaka mafy ianao nefa mbola resy ihany? Aza kivy fa miezaha foana. Hoy ny Baiboly: “Mety ho lavo impito ny marina, nefa ho tafarina ihany.” (Ohabolana 24:16) Mampirisika antsika ‘hiarina’ àry ilay Raintsika any an-danitra. Hanaiky hampiany ve ianao? Aza sasatry ny mivavaka aminy àry. Ianaro ny Teniny mba hanananao finoana matanjaka. Manatreha fivoriana mba ho tapa-kevitra ny hanohitra fakam-panahy foana ianao. Tadidio ity fampanantenan’ny Baiboly ity: “Hanatanjaka anao aho ka hanampy anao.”—Isaia 41:10.
Hoy i Njaka, ilay voaresaka terỳ am-piandohana: “Niezaka be aho vao naharesy an’ilay fahazarana nijery sary vetaveta. Imbetsaka aho no resy nefa vitako ihany ny nanohitra an’ilay izy, noho ny fanampian’Andriamanitra.” Hoy koa i Hery, ilay voaresaka tany aloha: “Afaka nanao firaisana tamin’ilay mpiara-miasa tamiko aho, raha tiako. Hentitra anefa aho ka nilaza taminy fa tsy hanao an’izany. Faly erỳ aho fa madio ny eritreritro. Ny tena zava-dehibe anefa dia hoe afaka nampifaly an’i Jehovah aho.”
Afaka matoky koa ianao hoe hampifaly ny fon’Andriamanitra, raha tsy mivadika ka manohitra fakam-panahy.—Ohabolana 27:11.
^ feh. 2 Novana ny anarana sasany ato amin’ity lahatsoratra ity.
Hizara Hizara Ho Vitanao ny Hanohitra Fakam-panahy
Soratra Fandikana boky NY TILIKAMBO FIAMBENANA Nahoana Ianao no Tokony Hivavaka?
Hizara Hizara NY TILIKAMBO FIAMBENANA Nahoana Ianao no Tokony Hivavaka?
Nahoana Ianao no Tokony Hivavaka?
NY TILIKAMBO FIAMBENANA Nahoana Ianao no Tokony Hivavaka?